February 2012 ~ Rohingya Blogger
Author: HANNA HINDSTROM Credit Here : Read More
ဥရောပ ပါလီမန်မှာ ဒေါ်စု မိန့်ခွန်းပြောဖို့ ဖိတ်ကြားမည်
ဥရောပ ပါလီမန်တွင် မိန့်ခွန်း မြွက်ကြားပေးရန် အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖိတ်ကြားမည်ဟု ဥရောပ ပါလီမန် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ဥရောပ ပါလီမန်မှ ချီးမြှင့်သော ၁၉၉၀ Sakharov ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်တွေ့ဆုံစဉ် ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ Martin Schulz ၏ ဖိတ်ကြားချက်ကို ကိုယ်စားလှယ်များက သတင်းစကား ပါးမည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပ ပါလီမန်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအား ကြိုဆိုပြီး ဂျာမဏီ လွှတ်တော် အမတ် Werner Langen ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးသည် သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နေပြည်တော် လွှတ်တော်နှင့်လည်း တရားဝင် ဆက်သွယ်ရေးများ ထူထောင်ထားရှိရန် သွားရောက် လည်ပတ်ဦးမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသည့် ဥရောပသမဂ္ဂ EU ၏ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများအား ပယ်ရှားရန်အတွက် ဥရောပ ပါလီမန်က ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ဆုံးဖြတ်ဖွယ်ရှိပြီး လူသားချင်း စာနာသည့် အကူအညီများလည်း ထပ်မံပေးဖွယ်ရှိနေသည်။
EU ဖွံ့ဖြိုးရေးမင်းကြီး Andris Piebalgs က မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အတွက် ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကူညီမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က Andris Piebalgs နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အရေးပါသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်နေသော် လည်း EU ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနေသည်ကို ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။ Andris Piebalgs အနေနှင့် လာမည့် ကြားဖြတ်
ရွေးကောက်ပွဲများ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုရှိပါက ပိတ်ဆို့မှုများလျှော့ချရေး ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Source :မဇ္ဈိမသတင်းဌာန Read More
ဥရောပ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မနက်ဖန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးပါ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေး ဥရောပပါလီမန်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ၊ မနက်ဖန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၉) ရက်မှာ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပြီးတော့၊ ဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အနေနဲ့ ဥရောပပါလီမန်အဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် လက်ခံတွေ့ဆုံတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေး ဥရောပပါလီမန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဂျာမန်ခရစ်ယန်ဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့ ဥရောပပါလီမန်အမတ် ဒေါက်တာ ၀ါနာလယ်န်ဂင် (Dr. Waener langen) ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်လာတဲ့ ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် မြန်မာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ တခြားသော မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေ၊ လူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ရန်ကုန်မြို့အနီးက ဥရောပ သမဂ္ဂရဲ့ အကူအညီနဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကိုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပြီးတော့၊ မတ်လ (၁)ရက်နေ့ ညနေမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့က Chatrium Hotel မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်လို့လည်း၊ ဘန်ကောက်မြို့ ဥရောပသမဂ္ဂရုံးက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းကြေညာချက်မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဥရောပပါလီမန်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မကြာသေးခင်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ အပြုသဘောဆောင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့၊ ဥရောပပါလီမန်က ချီးမြှင့်တဲ့ Sakharov ဆုကို ရရှိထားသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့၊ ဥရောပပါလီမန်မှာ လာရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးဖို့၊ ဥရောပ ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမာတင်ရှုလ်ဇ် Dr Martin Schulz ရဲ့ဖိတ်ကြားလွှာကိုလည်း၊ အခုလာရောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ၀ါနာ လယ်န်ဂင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပေးအပ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း၊ ဥရောပပါလီမန်သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
By Nyein Khet (VOA)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးငှာန မြိုတေ့ာ်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန် နေရာ တွင် မန်းတိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဦးအောင်မောင်းအား ပြောင်းလဲခန့် ထားလိုက်ကြောင်း သမ္မတ၏ သ၀ဏ်လွှာကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ရက်က ကျင်းပသည့် ဒဿမနေ့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် အစည်းအဝေး စတင်ချိန်၌ မန်းလွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဖတ်ကြား သည်။ မန်းမြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန်အား ဘဏ္ဍရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲ ခန့် ထားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ “သတင်းစာထဲမှာ မြို့ တော်ဝန်ပုံကို မထည့်ခိုင်းတာကြာပြီ။ မြို့ တော်ဝန်ပြောင်းသွားတာ ဟုတ်လားလို့ ခဏခဏ သတင်းထွက် နေတာကြာလှပါပြီ အခုတော့ သေချာသွားပြီ” ဟု မန်းမြို့ ရှိ သတင်းထောက် တစ်ဦးကပြောပြသည်။ ယခုမြို့ တော်ဝန်အသစ် ဦးအောင်မောင်းသည် တိုင်းဒေသကြီး အဖွဲ့ တွင် ဘဏ္ဍရေးနှင့် အခွန် ၀န်ကြီးအဖြစ် ဆောင်ရွှက်နေသူ ဖြစ်ပြီး ယခင်က မန်းတက္ကသိုလ်မှ ပါမာက္ခဟောင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဦးဖုန်းဇော်ဟန်ကို မြို့ တော်ဝန်အဖြစ် ၂၀၁၁ မတ် ၃၀ရက်က စတင် ခန့် အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း မန်းမြို့ တော်ဝန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ လွှတ်တော် ကျင်းပတော့ စည်ပင်နဲ့ ဆိုင်တဲ့အမေးတွေကို ဦးအောင်မောင်း(မြို့ တော်ဝန် အသစ်) ကဖြေကြားပြီး ၊ ဘဏ္ဍရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဦးဖုန်းဇော်ဟန်က ဖြေကြား ခဲ့ကြောင်းလွှတ်တော်ရောက် သတင်းယူသော သတင်းထောက်တစ်ဦး ကပြောသည်
Source :VOA Read More
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ကို မကြိုဖို့၊ မကြည့်ဖို့ မြန်မာ့အသံ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသိန်းအောင် အမိန့်ထုတ်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးတိုင်း ပါတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်က အပြန်မှာ နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့ ရှိ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို အသံလွှင့်ရုံမှာ တနိုင်ငံလုံးကို မဲဆွယ်
ပြောကြားမယ့် မိန့် ခွန်းကို အသံသွင်းယူဖို့ ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ NLD ပါတီ၏ စည်းရုံးရေး ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို မြန်မာ့ အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ တဆင့် မက်လ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်တပ်ကုန်းအသံလွှင့်ရုံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်
တဲ့အခါမှာ မြန်မာ့အသံဝန်ထမ်းအားလုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဘယ်သူမှ မကြည့်ရ၊ မကြိုရ
လို့ မြန်မာ့အသံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသိန်းအောင်က ၀န်ထမ်းတွေကို အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နေပြည်တော် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဌာန ဝန်ထမ်းများကို သောကြာနေ့ မနက်ပိုင်းက သီးသန့် အစည်းအဝေး တရပ် ခေါ်ယူကာ အဆိုပါ အမိန့် ကို ထုတ်ပြန် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့သူ ဝန်ထမ်းများက ပြောပါတယ်။
၀န်ထမ်းတွေကို ခေါ်ပြီး အမိန့်ထုတ်တဲ့ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ သူက ၀န်ထမ်းတွေကို တွေ့မှာလား၊ မတွေ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့ (၅) ကြိမ်တိတိ မေးတယ်လို့ မြန်မာ့အသံဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ၀န်းထမ်းတွေက မတွေ့ပါဘူးလို့ ဖြေရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဦးသိန်းအောင်က အင်တာနက်မကလို့ ကြိုက်တာတင်လို့လည်း ကြိမ်းဝါးလိုက်ကြောင်း မြန်မာ့အသံဝန်ထမ်းများက Myanmar News Now ကိုပြောပြပါတယ်။
Source :သစ်ထူးလွင် Read More
Burma’s human rights situation has improved notably in some respects but it has significantly worsened in others, Amnesty International (AI) said this week. It called for the U.N. to seriously consideracommission of inquiry to investigate war crimes and systematic human rights abuses.
–Ratify and effectively implement core U.N. human rights treaties and their optional protocols and the Rome Statute of the International Rome Statute of the International Criminal Court. Credit Here: Read More
သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ပြည် ဘာသွားလုပ်သလဲ
သူရဦးရွှေမန်း နဲ့ အမျိုးသား ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ၀ူဘန်ကို
အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ တရုတ်ပြည်ခရီးသတင်းကို ဒီနေ့ထုတ် အစိုးရအာဘော် သတင်းစာများမှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အနာဂတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ရမှုကို သင်ခန်းစာယူမယ် တဲ့။
သတင်းတွေဖတ်နိုင်ဖို့ လင့် ၃ ခု ချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဦးရွှေမန်းက နေပြည်တော်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ရှိနေချိန်မှာ တရုတ်ပြည်ကို သွားခဲ့တာပါ။ တရုတ်က ခေါ်လို့ သွားတာပါ တဲ့။ ဒီအကြောင်း ရေးထားပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြမယ် ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်လည်း ပါပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ရတာ ပြည်တွင်းအခြေအနေသာမက ပြည်ပအခြေအနေနဲ့လည်း ဆိုင်တယ် တဲ့။
ပူးတွဲစီမံကိန်းကြီးတွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်၊ အနောက်နိုင်ငံတို့နဲ့ ပေါင်းနေပေမယ့် တရုတ်နဲ့လည်း ဆက်ပေါင်းပါမယ် တဲ့။
Credit: Irrawaddy Blog
ဒေါ်စု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လျှောက်ထားမှု ကန့်ကွက်ချက် NLD ချေပ
ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်း
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကော့မှူးမြို့နယ်ကနေ ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံဖို့ နာမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့တဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူး ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ထားတဲ့ကိစ္စကို NLD က ဒီကနေ့မှာ ချေပလွှာ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ကန့်ကွက်ထားတဲ့ အချက်တွေဟာ မမှန်ကန်တဲ့အတွက် တစ်ချက်ချင်းအလိုက် ပြန်လည်ချေပခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်ကွက်ထားတဲ့ကိစ္စ သူ့ပါတီအနေနဲ့ လက်မခံကြောင်းကို သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်းက အစီရင်ခံထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးတင်ရီ ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်းနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီး ကန့်ကွက်ထားတဲ့ကိစ္စကို NLD ပါတီကနေ ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကော်မရှင်ရုံးမှာ ချေပလွှာတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ NLD ဘက်က ပြန်လည် ချေပခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်း က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“အဓိကအချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ပိုက်ဆံတွေ ရှိတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကို အစိုးရကို မကြေညာဘူး။ အဲ့ဒီစွပ်စွဲချက်တစ်ခု။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ဘက်က ဖြေရှင်းချက်အရ လုံးဝ မှားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ငွေကြေး နိုင်ငံခြားမှာ တပြားတချပ်မှ မရှိဘူး။ ရရှိတဲ့ ဆုကြေးတွေကိုလည်း လူမှုရေး ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို တခါတည်း လွှဲပေးလိုက်တော့ သူ့မှာ ဘာမှ မရှိဘူး။ ဒုတိယတစ်ချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရဲ့ နေထိုင်ခွင့် ဂရင်းကဒ်ရတယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဂရင်းကဒ်စနစ်လည်း မရှိဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အဲ့ဒီအခြေအနေမှာ မရှိဘူး။ အဲ့ဒါပဲ ချေပခဲ့တာပါ။”
ဒီကန့်ကွက်ချက် ချေပချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တိုင်း ကော်မရှင်က မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ပြောတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးတင်ရီ ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ ခရိုင်ကော်မရှင်ရုံးမှာ တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကန့်ကွက်လွှာကို ခရိုင်ကော်မရှင်ရုံးက ပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကော်မရှင်ကို ထပ်မံ တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကန့်ကွက်ချက်အပေါ် NLD ဘက်ကနေ ဒီကနေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကော်မရှင်ကို ပြန်ပြီး ချေပလွှာ တင်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပဲ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်က NLD ပါတီကနေ ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားနိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့တဲ့ NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုကလည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးတင်ရီရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်ဟာ အများပြည်သူရဲ့ သဘောထားကို ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်တဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ဒီကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကို သွားတဲ့နေရာမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ရယ်လို့ အများက လက်ခံထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီရေစီးထဲမှာ၊ နိုင်ငံရေးရေစီးထဲမှာ မပါနိုင်အောင် အဟန့်အတား ဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးဟာ မြန်မာပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားနဲ့ ဆန့်ကျင်ရာရောက်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေ လိုလားချက်နဲ့လည်း ကွဲလွဲနေတာဖြစ်မှာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် ကျနော်တို့က ဒါဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အဟန့်အတားဖြစ်တာကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ဟန့်တားရာ ရောက်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီက ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကို ကျနော်တို့က လက်မခံဘူးလို့ ပြောရတာပါ။ ဒုတိယအချက်ကတော့ NDF ဟာ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီမှာ ပါတဲ့အခါကျတော့ ၁၀ ပါတီထဲမှာပါတဲ့ ပါတီထဲက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ယောက်က ထ ကန့်ကွက်တဲ့ကိစ္စဟာ အများပြည်သူတွေရဲ့ သဘောမှာ ၁၀ ပါတီစလုံးကပဲ သဘောတူသလိုလို၊ အားလုံကပဲ လက်ခံတဲ့ သဘောတူသလိုလို ဖြစ်မှာကို မလိုလားပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။”
NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာစလုံးမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ရာ အချိန် ၁ လသာ လိုတော့တာနဲ့အမျှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်တွေကို ဆက်တိုက် ထွက်ခွာနေတာပါ။ လာမယ့် စနေနေ့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနဲ့ နေပြည်တော်အပါအ၀င် ပဲခူးတိုင်းကိုလည်း တဆက်တည်း သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနေမှတဆင့် ရန်ကုန်ကို ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်း က ဗွီအိုအေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ကို စည်းရုံးရေးခရီး ထွက်ခဲ့သလို အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုလည်း တွေ့ဆုံပြီးတော့ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခွမြို့နယ်ကို နေ့ချင်းပြန် စည်းရုံးရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Burmese Army (Tatmadaw) is Anathema to Democracy & Union by Kanbawza Win
Daw Aung San Suu Kyi in her speech to Kachin State said, “Everyone must adhere to the spirit of Panglong, which is based on equality and unity, with respect, faith and belief in each other. All of these are essential for creating and maintainingagenuine democracy,” She seems to strike the right note because now the people of Burma had slowly discovered that it was the Tatmadaw controlled by the hard liners pulled by Than Shwe are really the culprit of all the troubles befalling on the country as it is anathema to the Union of Burma, Democracy and Human Rights. The Tatmadaw’s ingrained phobia of federalism is the biggest stumbling block along with hard liners’ dissatisfaction of the Tatmadaw playingaperceived smaller role in politics, which can derail the reforms and take the country back to dictatorship. The Tatmadaw has effectively destroyed every civil institution that might have played that role of leading the country. As long as the Tatmadaw military prevents the rise of pluralism within the governmental structure and the growth of civil society there will be no one to challenge the Tatmadaw is their sincere basic belief. Hence the military believe that they are the only present and future institution capable of keeping Burma united asasingle country, and that pluralism is destructive to national unity. This is why they have essentially replaced earlier state ideologies (including socialism under the military-led BSPP regime and Buddhism under U Nu) with an ideology that effectively focuses on the military itself and its comprehensive societal role and, in part, on its mythic history. Whereas under the military's Burma Socialist Programme Party period (1962-1988) the military were portrayed as the keepers of the socialist flame but as of, today it is the military itself that is the ideological nexus of society. The Tatmadaw consider past political leaders as venal, corrupt, ineffective, and incapable of running the state and assuring its unity. The Tatmadaw believe that the ethnic nationalities are inherently inferior (culturally and socially) and would split from Myanmar authority if given the chance. The Tatmadaw also believe the ethnic nationalities are distrustful of the Myanmar majority and fear Myanmar ethnic domination. The army provide only lip-service respect for ethnic nationalities culture through ritualized holidays and propaganda efforts. The Tatmadaw view economic progress, reform, or liberalization as secondary to maintenance of political control, or indeed asameans to such control. The primary function of an improved economy is greater military power, general political acquiescence of the population to military control through military delivery of greater economic rewards for loyalty, and improved political legitimacy, and not directly the betterment of the human condition. To this end, the military believe they must control the economy via their cronies and have set up direct and many indirect mechanisms. The military view any form of pluralism within the administration at any level, in the dissemination of information, and among non-governmental organizations asathreat to the state and their control. The military have no intention of giving up essential power even thoughacivilian facade for their control is likely eventually to be established. They will not grant any ethnic nationality groupsasignificant degree of power at the national level, although some modest local self-government will be given to some groups with which cease fires have been arranged. The military is rather reluctant to allow Daw Suu to play any significant role in any administration. It is just doing to lift the sanctions. The Tatmadaw believes that the country is surrounded by enemies–real and potential. These threats no longer take the form of territorial aggrandizement, but economic domination and the possibility of encouraging ethnic nationalities separatism. This fear is based onareality once extinct e.g.awell documented foreign support include American assistance to KMT forces in Burma, Pakistani-Bangladeshi support for Muslim (Mujahid now Rohingya) insurgents, Thai help toavariety of insurgent groups (both ethnic and students), Indian backing of anti government groups, some British support for the Karen, Chinese aid to the Burma Communist Party and PRC Chinese maps shows some part of Burma into their territory, while WA isaChinese tribe andageneral perception that Christian minorities have closer support and contact with foreigners than do the Myanmar Buddhist. These fears include China as potentially (or perhaps even presently) having undue influence in Burma. The military regard the United States as highly significant to them because of its international influence, but distrust U.S. motives and influence, believing that if sufficiently provoked the U.S. might intervene militarily in Burma as it had done in Afghanistan and Iraq. Foreign public criticism of the Junta simply forcesanationalistic response, and foreign pressures for reform are viewed as infringements of Burmese sovereignty, and foreign support for the NLD undercuts the NLD’s potential legitimacy (in their view). If so the theory that the Tadmadaw to take temporary control, whenacivilian government strays from its ‘national ideal’ or obligation is correct then it should have solved the civilian conflict long ago among the various ethnic nationalities as any genuine guardian. But this was not the case and is entirely opposite of what they claim. For example, there wasademocracy dilemma in civilian rule in early 1950 to 1960: civilian rulers from the Myanmar extremists group tried to dominate the country by secret Buddishnisation and Myanmarnization over other ethnic nationalities by making Buddhism the state religion, the Tatmadaw did nothing even though it express that it was against it. So from this theory it proves that Tatmadaw is notaguardian of the country and did nothing right even though it knows that it was wrong. This alone proves beyond doubt that Tatmadaw is not genuine custodian of the country as it claims. It was just in the pockets of the Generals who enriched themselves at the expense of the entire people of Burma. This certainly violates the nation’s constitution as well as the fundamental Panglong Agreement, or the Independence national day declaration by discrimination and restriction of freedom. Society’s support of this fundamentalist and pro-domination trend is alwaysaproblem for nation building. It apparently led to the failure of civilian rule. In such an event, the intervention of the military is appropriate to prevent extremists taking power. But here the military also became the partner of extremist Myanmar. The people later realized they were linked with each other.Slowly, we discovered that the Tatmadaw initially, immediately reorganized the army and later heldacoup to form the Socialist party, with the purpose of monopolizing military power and controlling the country. Looking back, the behaviour of the Tatmadaw was not about creatingaresolution for democracy, but rather about having lasting political power and control of the country. Hence it was again the very grain of democracy and union spirit (Pyidaungsu Seikdat). When the military took power on Sept 19th, 1988 after killing more than three to four thousand s people, it was not about the ethnics but about the issue of democracy and the majority of the Myanmar nationalities participated. This is the authenticated proof that the Tatmadaw is not only against the Union spirit but also against Democracy and Human Rights According to logic, if and when, conflicts between the Myanmar dominant group and other ethnic groups arise, within the system of civilian rule, the Tatmadaw should protect and be responsible for their reunification if it claims to be the mentor of the nation instead of aiding the ethnic-cleansing of the other ethnic groups. The Tatmadaw should play an impartial role if it is really the people’s army. Now it is clear that the military intervenes to protect and advance the interests ofaspecific class andareligious group, the Myanmar Buddhist. The Tatamadaw is systematically maintaining power itself to control the civilian population. This is raison d’être of allegedly removing the federal army battalions as the Shan, Chin and Kachin Regiments. The Tadmadaw was also hand-in-glove with the Myanmar extremists helping to exploit and collapse other ethnic societies. This is another regrettable mistake in the Tatmadaw history and proof beyond doubt that it has no Pyidaungsu Seikdat. Hence it is and wasaMahar Myanmar orientated TatmadawThe Tatmadaw seemed to try to re-assume democracy in the 27 May 1990 election. But when the result were declared it was clear that people did not approve of the army being in power. So they refused to give up power .The Tatmadaw has tasted power foralong period that it cannot let it go even after 2010 elections they still hold on to the form of ex generals and handpicked people and surely will stay on in power with this unreasonable constitution . Hence Tatmadaw is in the category of the enemy of the people of Burma and the country itself. Now it is by trick that they are trying to organise the dissident Myanmar and not the ethnic nationalities. The only option is for the people to unite and fights back and until and unless there is serious or any damaging opposition armed attack, their attitude is unlikely to change. The Tatmadaw has cheated the public several times as it is doing now. This isatrap for the Burmese people as the military always blocks efforts to obtain civilian rule. The Burmese people have lost the opportunity of havingacivilian administration and their liberty, for more than halfacentury. Hence even inaguided democracy as it is today Thein Sein cannot control the army. Furthermore, inademocratic system, the concern is to ensureaprofessional and political military that acknowledges civilian authority and executes the orders ofademocratically elected government. These seem to be only one way if we were to follow President Obama’s speech acceptance speech of the Nobel Peace Prize, “A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince al Qaeda's leaders to lay down their arms,” can be demonstratively applied to Burma—a nonviolent movement could not have halted Burmese armies. Negotiations cannot convince Burmese feudal warlords and thugs to lay down their arms. The Burmese Junta craved for its legitimacy so much that they cannot even takeasense of humour, nor do they appreciate being laughed at. It came as no surprise then when the ruling military regime in Burma sentenced the country’s best known comedian, named Zarganar, to 45 years in prison. Even though he is released it painted an astonishingly brutal campaign to eradicate all political opposition The Junta had sentences for two reasons. The first is to decapitate any possibility of challenge toatightly scripted and controlled political reform process, by locking away the leadership and spiritual and artistic supporters of resistance to military rule. The second is to instil fear in an already fearful and beaten down population; by targetingacross-section of Burma’s resurgent civil society, the regime is stating clearly that resistance is futile. The relation between the military-ruled state and civilians is highly coercive and makes any expression of public dissent for civiliansamatter of life and death. The military is unable to distinguish between citizens and enemies of the state was confirmed during the uprising in September 2007, when even marching monks were perceived as nothing but “state enemies” that have to be defeated. This perception is underpinned by an institutionalised elitism andageneral disdain for civilians and politicians in the upper echelon of the Tatmadaw that goes back to the 1950s.The involvement in administrative, political, and economic matters nourished the idea of extensive competencies within the military. The ruling regime prevented the emergence of any independent social and political organisation, and tried to subdue the citizenry further into an invisible entity, totally compliant and mute. A coherent strategy or consistent method in dealing with civil society is not discernible. The regime’s Home Ministry and the Ministry of Culture made an attempt to shutdown independent and community-based social, cultural, religious, and ethnic organisations in Rangoon in 2007. In general, the regime intervenes whenever its threat perception is raised, usually when an independent organisation or individual becomes too successful and attracts too many members or followers. The most famous example is the Rangoon based Free Funeral Services Organisation that is continually harassed due to its successful charity work. On the other hand the regime tries to define and control civil society exclusively through government sponsored organisations like the Myanmar Women’s Affairs Federation, Myanmar Fire Brigade, Myanmar Red Cross Society, and so on, which are led by active and retired military officers and organises mass rallies, conducts military training, and undertakes social and community services. It is increasingly involved in policing measures and harassment of activists aided byamilitia group, Swan Ah Shin “Owners of Vigour” Both organisations took part in the crackdown of the demonstrators in the monk-led uprising in September 2007. Tatmadaw have mocks the very idea of democracy and fundamental freedoms. The regime thrives on frustration and lack of attention, happily repressing its people in quiet. If we do not loudly and strongly condemn this draconian process, hundreds of Burma’s leading thinkers and performers will disappear into the country’s squalid gulag, and the ephemeral promise ofaliberal and free Burma could well be lost to another generation. Hence it is very vivid that Tatmadaw is the only stumbling block against the Pyidaungsu the Union of Burma and against democracy itself. Those who argue that Tatamadaw should be retained against the external threat of the country should consider the above facts. Once this enemy Number One, Tatamadaw is gone, then peace, sovereignty, unity with love will return to Burma.  Mann, Zarni: Suu Kyi Delivers Message of Trust, Respect in Myitkyina Irrawaddy 24-2-2-12  Wai;Kyaw San Beyond Ceasefires: Burma’s Precarious Peace Process – Analysis RSIS, Nanyang Technological University  Zaw, Aung; “ Oslo’s Message” Irrawaddy, Dec 17th 2009  Mathieson; David Scott,. “No time for Jokes” in National Post  Nyein; Susanne Prager; Expanding military, Shrinking citizenry and the New Constitution Journal of Contemporary Asia Vol.39, No. 4, November 2009, pp.638-648.  At the time of this writing, over 2,000 dissidents and members of the political opposition are under detention, including Daw Aung San Suu Kyi is under detention.  See Steinberg; David Turmoil in Burma. Contested Legitimacies in Myanmar, Norwalk: East Bridge, 2006: 46, 93  P. Pinheiro, Report of the Special Rapporteur Pinheiro, 11. December 2007, Geneva: Human Rights Council, 2007. Read More
Burma: Changing the course, Time to Push Forward by Htun Aung Gyaw
The way Burmese Generals shed their uniforms and transformed toacivilian government isareminder of the same tactics used by their predecessor General Ne Win, who first established military dictatorship in Burma. However this time, changing to civilian government hasadifferent course and there is an opening that was not there under the Ne Win rule. Ne Win changed his army uniform into civilian and became the first quasi-military-backed civilian President. Even though he claimed asacivilian government he had total control of political power with his one and only political party, Burmese Socialist Programm Party which controlled one hundred percent of the political space. Unlike Ne Win, the current Thein Sein regime allowed the opposition political party to exist. In the coming election, the most influential woman of Burma and worldwide Democracy icon, 1991 Nobel Peace prize Laureate, Aung San Suu Kyi and her party will enter the race on April 1st, 2012. However there are only 48 vacant seats for the by-election. Even if she wins all the seats she cannot compete against the regime’s party USDP which hold 68% in the parliament plus 25% non-elected military personals in the parliament. Some critics say there will be no change after the election. In fact it is true there will be no change for the moment but asahighly influential person her voice will be heard in the parliament and it will force the regime to change whether they want to or not. The catch is she has no right to challenge the undemocratic laws in the 2008 constitution because after the April by-election parliament will recess until next year. Thuya Shwe Mann the speaker of the lower house of the parliament recently stated the appropriate business laws needed to introduce immediate foreign investment. He warned that without appropriate laws no one will invest in Burma and Burma will still be undeveloped and left behind the neighboring countries. It seems some elements in the Thein Sein regime are struggling for real change and some hardliners are blocking it. Some critics say change is only on the surface and the regime is playing the good cop and bad cop game. But I think we cannot lose anything to encourage the moderates like Thein Sein and Shwe Mann for real change, rather than staying on the side lines. If they are for real and willing for the country real development, we have to support them. If we cannot move forward and do nothing the country will slide deeper into China’s dependency rather than move toward democratic change. China and Russia are the blockades that do not want to see the emergence of democratic governments in the world. We have witnessed this case in Burma and Syria. People are suffering from brutal suppression in both countries but the UNSC resolution to help the unarmed civilians have been vetoed by China and Russia. My main concern is if we still stand on our principle of 100% democratic system, the military will not accept. They fear to be punished and that is the reason they gave amnesty to the government officials within the 1988- 2008 period under the 2008 constitution. That is the reason they want to protect the constitution. But if we show them we want real freedom and not revenge, we can build confidence between the democratic forces and the military personals. Only then we will move forward for national reconciliation. We have to and dare to participate in real politics and not idealistic stances, which have no space for moving forward. Of course there isachance some want to play dirty politics but we have to takeachance on those who may actually want to change and save our country from foreign dependency, especially from China. We have to encourage the moderates willingly and cautiously for change. President Thein Sein needs to release all remaining political prisoners once and for all to prove that he has true desire for national reconciliation and nation building. Htun Aung Gyaw
Phuket's Rohingya Boatpeople: Gone Within 24 Hours, But Not Forgotten
Refugee News, Rohingya News
The likelihood is that these men and boys, even though they number about 100, will simply vanish one day. Perhaps tomorrow, perhaps inacouple of weeks or months. PHUKET: As Phuketwan predicted, the 90 Rohingya boatpeople who were forced to put ashore yesterday onaPhuket beach are no longer on Phuket. From their predawn arrival at southern Phuket's Nai Harn beach onaflimsy timber craft that was not capable of carrying them onwards, all the men and boys have now disappeared within the space of 24 hours. Some reports say that there may still be 12 Rohingya unaccounted for on Phuket. That may be true, or it may just be that there has beenamiscount of the number of passengers. What we can say with certainty is that the 90 men and boys who surrendered to Phuket police yesterday have all gone. Officials are not saying what happened. The men and boys - 10 of them were teenagers, some just 13 years old - were probably carted off inatruck to Ranong,aport on the border between Thailand and Burma. While briefly on Phuket they were allowed no contact with NGOs, no chance to press their case for refugees status, just carried off Phuket sometime in the dark last night. In secrecy and contrary to international standards, Thailand is once again pressing the boundaries of how nations should deal with unexpected immigrants who arrive by sea. This isacause for considerable alarm because, although the details of the group were recorded at Chalong Police Station and again at the Immigration HQ in Phuket City, we were unable today to obtainalist of the names of the men and boys on the boat that landed on Phuket. Aid agencies are perhaps even more alarmed by the lack of transparency in the process. But so far, there is no indication that the boatloads of Rohingya arriving along the Andaman coast, on Phuket and north and south of Phuket, are being mistreated.
The Royal Thai Navy has given an assurance that it is aware of the need for UN human rights standards to be maintained. Whether this is possible underapolicy where there is no transparency isamoot point. We cannot forget 2009 when the then Thai government secretly repelled unwanted boatpeople with the ''pushbacks'' policy, leading to the deaths of hundreds at sea. The last known boatload of Rohingya to land on Phuket - about this time last year - were held in detention for several weeks before they also disappeared. There is no suggestion of misdeeds. But it is believed the unwanted Rohingya, with no Burmese citizenship and therefore no hope of being returned to their homeland, are being tacitly handed back to people-smugglers. Despite the Rohingya being among the most downtrodden people on the planet, the nations now engaging in conciliatory talks with Burma appear to be prepared to led concern for Burma's worst act of repression and subjugation slide for the time being.
We hope this attitude does not cost any lives. We also are reminded ofaless-than-prophetic paragraph that appeared inalocal tabloid on January 28, 2009, soon afterPhuketwan and the South China Morning Post revealed the reprehensible ''pushbacks'': ''Despite some rather dramatic 'reports' and opinions offered in local blogs and chat rooms, most resort managers and tourism officials contacted say they are not expecting the arrival of the Rohingyas on Phuket's beaches any time soon.''
Do not expect an upsurge of concern about the missing boatpeople
နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံကို ဘယ်သူတွေက ဆပ်ကြရမှာလည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခု နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံ ရှိနေတယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး လှထွန်းကနေ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီလို တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံထဲက (၈) ဘီလီယံကျော်ဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချူပ်ခဲ့တဲ့ နေ၀င်း အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်ကပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကြွေးမြီ (၃) ဘီလီယံခန့် ကတော့ သန်းရွှေ အုပ်ချူပ်မှုကာလအတွင်းက ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတွေကို International Monetary Fund (IMF)၊ World Bank၊ International Financial Corporation (IFC)၊ International Development Association (IDA) နဲ့Asian Development Bank (ADB) တို့ ထံကနေ ရယူခဲ့တဲ့ ကြွေးမြီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတင်ရှိမှုတွေဟာ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ နေ၀င်းနဲ့သေဆုံးခါနီးဖြစ်နေပြီးဖြစ်တဲ့ သန်းရွှေတို့ နဲ့အထူးသက်ဆိုင်တယ် ဒါပေမယ့် နေ၀င်းလက်ထက်မှာရော သန်းရွှေလက်ထက်မှာရော အတူတူ ဝေစားမျှစားလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လက်ရှိသူတွေလည်း ပါဝင်သက်ဆိုင်ပါတယ်။ လက်ညှိုးထိုး လွဲချပြီး ငါတို့ နဲ့ မဆိုင်ဖူး အရင်သူတွေ လုပ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပြီး ခေါင်းရှောင်လို့ကိုယ်လွတ်ရုန်းလို့မရပါဖူး။
တိုင်းပြည်ရဲ့တောတောင်ရေမြေ သဘာသယံဇာတတွေကို မောင်ပိုင်ဆီးပြီး ပြည်သူဘဏ္ဍာတွေ တိုင်းပြည်ပိုင်တွေကို ကိုယ့်အိတ်ထဲထည့် ကိုယ့်မိသားစုဆွေမျိုးအဆက်ဆက် ကြီးပွားချမ်းသာအောင် မတရားသိမ်းကျူံးပြီး ကြီးပွားအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရူးအုပ်စုရော ခေတ်ပျက်မှာ အချောင်ဝင်နှိုက်တဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးအဖြစ် စီးပွားရေးသောင်းကျန်းခဲ့သူများလည်း ယခု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတွေအတွက် အဓိကတရားခံ သက်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ခုနှစ်ကစလို့ယခုကာလအထိ မကြာခဏဆိုသလို တူးဖေါ်ရရှိတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ပတ္တမြား ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးတွေ၊ ပေါလျှံလှတဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေနဲ့ရေနံ လောင်စာတွေ၊ တောတောင်ရေမြေရဲ့အရင်းအမြစ် ကျွန်းသစ် သစ်မာတွေ၊ ရေအားလျှပ်စစ်တွေကို ရောင်းချ ရောင်းတုတ်လို့ရရှိတဲ့ များပြားလှစွာသော ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာဟာ ဘယ်များရောက်လို့သွားခဲ့ပါသလည်း သွားပါသလည်း။ သီချင်းစာသားထဲကလို ဆိုရရင်တော့ “ဘယ်များရောက်သွားသလည်း၊ ဘယ်သူများ ယူသွားသလည်း” လို့မေးရပါလိမ့်မယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် မကောင်းတတ်လို့ သုံးစွဲပြတဲ့ မရှိသလောက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် အသုံးစရိတ်လေးထဲမှာတောင် အဆင့်ဆင့် ဖြတ်စားလဘ်စားလုပ်တာမို့ပြည်သူတွေအတွက် အသုံးစရိတ် တိုင်းပြည်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဟာ နေ၀င်း သန်းရွှေတို့အာဏာရူးတစ်သိုက်ရဲ့သားသမီးတွေ ဘုံးဘောလအော သုံးဖြုံးနေတဲ့ မုန့် ဖိုးလောက်တောင် မရှိပါဖူး။ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ စုစုပေါင်း ၁၁ ဘီလီယံကို ၅၆ သန်း လူဦးရေရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူပြည်သားတစ်ဦးအနေနဲ့ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ (၁၁) ဘီလီယံကို ဆပ်ဖို့၁၉၇ ဒေါ်လာ (ကျပ် တစ်သိန်းခွဲကျော်) ပေးပေးရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တင်နေတဲ့ နိုင်ငခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံတင်ရလောက်အောင် ဘယ်သူတွေ လုပ်ခဲ့သလည်း၊ တင်ရှိနေတဲ့ ကြွေးမြီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံကို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချခဲ့ပါရဲ့ လား၊ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံ ပမာဏ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်သူတွေ လက်ထဲရောက်သွားခဲ့သလည်း၊ ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံဟာ ဘယ်သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူတွေက ဆပ်ကြရမှာလည်းဆိုတာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရူးအုပ်စုတွေ ၄င်းတို့ ရဲ့မိသားစုဆွေတစ်သိုက် မျိုးတစ်သိုက်တွေ ခေတ်ပျက်သူဌေး အချောင်နှိုက် ကိုယ်ကျိုးရှာ အတ္တသမား လောဘသား စီးပွားရေးသမားကြီးတွေက ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ (၁၁) ဘီလီယံကို ဆပ်ကြမှာလား၊ မရှိဆင်းရဲ မွဲတေငတ်ပြတ်နေကြရတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေက ခါးဆီးခံပြီး ဆပ်ပေးကြရမှာလား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ တောတောင်ရေမြေ သယံဇာတတွေ ရောင်းချမှုနဲ့ ရရှိတဲ့ သန်းပေါင်းမြောက်မြားစွာသော ငွေတွေက ဘယ်ကိုရောက်ကုန်လို့တင်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတွေ ပုံမှန်ပြန်မဆပ်နိုင်ဘဲ လည်ပင်းထိ တက်နင်ရလောက်အောင် ကြီးမားသွားစေရတာလည်း။ တိုင်းပြည်ရဲ့ရသုံးငွေ နှစ်စဉ် နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ကို ပြည်သူလူထုထံ မှန်ကန်စွာ မတင်ပြဘဲ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတွေ ပျောက် သုံးစွဲမှုတွေ ဖျောက်ပြီး ယခုအချိန်ကြမှ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံရှိပါတယ်လို့ချက်ချင်းထုတ်ပြောတဲ့ပုံစံဟာ ဒီကြွေးမြီတွေရဲ့အဓိကတရားခံတွေလည်း ပျောက် လက်ရှိအုပ်ချူပ်သူတွေနဲ့မပတ်သက်လို့ပြောတဲ့ပုံစံဖမ်းတာမို့ဒါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် စော်ကားရုံမက အကြွေးဆပ်ပေးရမှာက မဆီမဆိုင်သူတွေက ဆပ်ကြပေတာ့လို့လုပ်တဲ့ အချိုးပါဘဲ။
ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံကို ပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့ အတွက် အဓိကတရားခံတွေဖြစ်တဲ့ တစ်ပါတီအာဏာရှင် နေ၀င်း (သေဆုံး) ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ မှန်သမျှကို သူရဲ့လက်ရှိ မိသားစုဝင် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်ရဲ့မတရား ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို ပြန်သိမ်းပိုက်ပြီး ပြန်ဆပ်စေရပါမယ်၊ ထို့ အတူ သေကာနီးဆဲဆဲ အာဏာရူးကြီး မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့သူရဲ့စိန်ရောင်တောက်ပြောင်နေကြတဲ့ မိသားစုဆွေမျိုးတစ်သိုက်လုံးရဲ့တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေ ဘုံးထားသမျှဟာတွေ ပိုင်ဆိုင်မှုမြောက်မြားစွာကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီး ယခု နိုင်ငံခြားကြွေးမြီတွေကို လျော်ပြစ်လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ၀င်း သန်းရွှေတို့ သာမက ယခုလက်ရှိ နေ၀င်း သန်းရွှေ အာဏာယူထားစဉ် ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အတူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ မဆလ န၀တ နအဖ၀င် ဗိုလ်ချူပ်တွေ ၀န်ကြီးတွေအားလုံးရော လက်ရှိ သိန်းစိန်အစိုးရအပါ စီးပွားရေးသျောင်းကျန်းသူ ခေတ်ပျက်သူဌေး အတ္တသမားကြီးတွေပါ ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ (၁၁) ဘီလီယံ ပြန်ဆပ်ရေးမှာ အဓိက တရားခံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ နေ၀င်း မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်၊
၂။ စောမောင် မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်၊
၃။ သန်းရွှေ မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်၊၄။ မောင်အေး မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်၊၅။ ခင်ညွှန့်မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုးတစ်သိုက်၊
၆။ မဆလ န၀တ နအဖ အဖွဲ့ ဝင် ဗိုလ်ချူပ်များ ၀န်ကြီးများနှင့် မိသားစုတွေမျိုးတစ်သိုက်၊
၇။ ခေတ်ပျက်မှာ အချောင်ဝင်နှိုက်တဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးအဖြစ် စီးပွားရေးသောင်းကျန်းခဲ့သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ တေဇ (Htoo Trading Company)၊ ဇော်ဇော် (Max Myanmar Group of Companies)၊ တင်မြင့်နိုင် (Asia World Co)၊ မိုက်ကယ်မိုးမြင့် (Myint & Associates Group)၊ အောင်သက်မန်း (Ayer Shwe Wah Company)၊ ပြည်အောင် နဲ့နေအောင် (Aung Yee Phyo Co Ltd and IGE Co Ltd)၊ ခင်ရွှေ (Zaykabar Company)၊ နေ၀င်းထွန်း (Ruby Dragon Jade & Gems Co Ltd)၊ ဌေးမြင့် (Yuzana Company)၊ အိုက်ထွန်း (Olympic Construction Co)၊ ချစ်ခိုင် (Eden Group)၊ စပ်ထွန်း (Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited)၊ ကျော်ဝင်းရွှေ (Kyaw Win Shwe Than Lwin Company)၊ ၀င်းအောင် (Dagon International Ltd)၊ မောင်ဝိတ် (Maung Weik & Family Company) နဲ့အောင်မြတ် (Mother Trading Company Ltd) အစရှိတဲ့ စီးပွားရေးသောင်းကျန်းသူများဟာ ဒီ နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ (၁၁) ဘီလီယံ ပြန်ဆပ်ရေးမှာ အဓိက တရားခံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁) ဘီလီယံကို ပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့ ဟာ ဘယ်သူတွေက အဓိကတာဝန်ရှိလည်းဆိုတာ သိကြတာမို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ဒီကိစ္စကို ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ထုတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ တိုင်းပြည်က မွဲ လူမျိုးက ဆင်းရဲတဲ့ကြားထဲနိုင်ငံခြားကြွေးမြီ (၁၁) ဘီလီယံအရေးကတော့ ရင်လေးစရာပါဘဲ
လက်တွေ့လုပ်ပြတာပဲ မြင်တွေ့ချင်ကြတယ်(လူထုစိန်ဝင်း )
– Atchaa KhamloPhuket,Thailand
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်ကွက်သည့် ဦးတင်ရီ၏ အယူခံလွှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တွင် ဆုံးဖြတ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိလစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်ထဲမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း ကြေညာရန်ကျန်ရှိသည့် ကော့မှူးမြို့ နယ်မှကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကိုယ် စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း ကို မကြာမီရက်ပိုင်း အတွင်း ကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
''ဦးတင်ရီက အယူခံလွှာကို(၂၂)ရက်နေ့နေ့လည်မှာ တိုင်းကော်မရှင်ကို လာတင်သွားတယ်။ တိုင်းကော်မရှင်အနေနဲ့တော့ ခရိုင် ကော်မရှင်မှာ မူလကကန့်ကွက်တဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးဆုံး ဖြတ်သွား မှာပါ။၂၈ ရက်နေ့မှာဆုံး ဖြတ်ချက်ချသွားမယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ အမြန်ဆုံး ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ် အတွက် အမည်စာရင်းပုံစံ(၁၀) ကပ်သွားမယ်'' ဟုရန်ကုန်တိုင်း ဒေသ ကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးကိုကို ကဆိုသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒ နယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံ ကြမည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည် စာရင်းကို ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံကြမည့် ညီညွှတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှ ဦးတင်ရီက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်း နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသဖြင့် အနောက် ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ပလပ်လိုက်သည်။ထိုသို့ပ လပ်လိုက်မှု အပေါ်အဆိုပါကန့်ကွက် ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းမှ တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ဖေဖော်ဝါရီ(၂၂)ရက်နေ့ ကအယူခံလွှာတင်ပို့ခဲ့ကြောင်းသိရ သည်။ထို့ကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှ လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ် (၅)ခုမှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အမည်များကို သက် ဆိုင်ရာမြို့နယ်နှင့်ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ အုပ်စုများတွင်ကြေညာပေးခဲ့သော် လည်းကော့မှူးမြို့နယ်တွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင် သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းများ ကို ကန့် ကွက်သည့်ကိစ္စမပြီး ပျက်သေးသည့် အတွက်အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်အားတိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည့်ဖေ ဖော်ဝါရီ(၂၈)ရက်နေ့နောက်ပိုင်း တွင် အမြန်ဆုံး ကြေညာပေး မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
''ကန့်ကွက်လွှာတွေမပြီး မချင်းတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းမထွက်သေးတဲ့အ တွက်တော့ အဲ့ဒီနေရာမှာပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေရော၊ တခြားကိုယ်စားလှယ် လောင်းပါစည်းရုံးရေး အတွက် နောက်ကျသွားတာ ပေါ့။ဒါကြောင့်(၂၈)ရက်နေ့ဆုံး ဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့ အမြန်ဆုံးကြေညာ ပေးမှာပါ'' ဟုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဌဦးကိုကိုကဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်း နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဆို ကာကန့်ကွက်ခဲ့သည့် ယှဉ်ပြိုင်အရွေး ခံမည့် ဦးတင်ရီ၏ ကန့်ကွက်လွှာအား တောင်ပိုင်းခရိုင် ကော်မရှင်ရုံးမှ ဇန်န ဝါရီ(၁၁)ရက် နေ့က ပလပ် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ကော့မှူးမြို့နယ်မဲ ဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အဆိုပါမဲ ဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ညီညွှတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီမှ ဦးတင်ရီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည်အချင်း နှင့် ညီညွှတ်မှုမရှိကြောင်း ဇန်နဝါရီ(၆)ရက်နေ့ကတောင်ပိုင်း ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ သို့ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကော့မှူးမြို့နယ် တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ညီညွှတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမှ ဦးတင်ရီနှင့်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဒေါက်တာ ဦးစိုးမင်းတို့က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြမည် ဖြစ်သည်။
ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရာတွင် ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း မပြုရသော ဥပဒေ
ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရာတွင် ငွေကြေးကောက်ခံခြင်း မပြုရသော ဥပဒေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်က လက်မှတ် ရေးထိုးအတည်ပြု ပြဌာန်းလိုက်ပြီဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဥပဒေကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဥပဒေတွင် ပါသည့်အခန်း ၁၅ အထွေထွေ ပုဒ်မ ၃၃ တွင် ရပ်ကွက် ကျေးရွာများ၌ ဧည့်စာ ရင်းတိုင်ကြားရာတွင် ငွေကြေးတစ်စုံတစ် ရာကောက်ခံခြင်း မပြုရကြောင်း ယင်းဥ ပဒေပြဌာန်းချက်အရ သိရသည်။ ယခင်က ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြား ရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေ အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာ တမ်း ကြေးအဖြစ်သော် လည်းကောင်း ငွေ ကြေးကောက်ခံ မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယခင်က မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ဧည့်စာရင်းတိုင် ကြားခဲ့ရာတွင် ကောက်ခံမှုငွေကြေးမှာ ကွဲ ပြားကြပြီး နေရာဒေသအပေါ် မူတည်၍ ဧည့်စာရင်းတစ်ခါ တိုင်ကြားလျှင် ကျပ် ၂၀ဝမှ ၅၀ဝအကြား ကောက်ခံနေမှုများ ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ ”အခုအချိန်ထိ ဧည့်စာရင်းတိုင် ရင် စာရွက်စာတမ်းကြေး၊ ရန်ပုံငွေဆိုပြီး တောင် ပြောပြီးမတောင်းတော့ဘူး။ စာ ရင်းသွင်းပြီးတာနဲ့ ၅၀၀ ကျတယ်ဆိုပြီး တော့ စာရေးတွေက တောင်းတော့တာပဲ” ဟု တောင်ဥက္ကလာပ နေ ဦးမျိုးဟိန်းက သူ အမြဲကြုံတွေ့နေရသည်ကို ပြောသည်။
ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ် ချုပ်ရေးမှူးရုံးများအတွက် ရုံးအသုံးစရိတ် များ သုံးစွဲနိုင်ရန် နှစ်စဉ်ရသုံးမှန်းခြေငွေ စာရင်း၌ မြို့နယ်အလိုက် သင့်လျော်သည့် ရန်ပုံငွေပမာဏကို ခွဲဝေသတ်မှတ်လျာထား ရမည်ဖြစ်ကာ ရန်ပုံငွေကို ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ညွှန်ကြား ချက်များနှင့်အညီ မြို့နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ တင်ပြတောင်းခံပြီး စနစ် တကျသုံးစွဲရမည်ဟု အခန်း ၁၃ ပုဒ်မ ၂၉၊ ၃ဝတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး လှည်းကူးတွင် အပြိုင်မဲဆွယ်
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခု ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ နေ့လည် သုံးနာရီခန့်တွင် NLD ပါတီနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ နေရာတစ်ခုနှင့် တစ်ခု မနီးမဝေးတွင် တစ်ချိန်တည်း၌ မဲဆွယ်ကြရာ ပါတီနှစ်ခုစလုံးတွင် ပရိတ်သတ် ရာဂဏန်းကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
Source :The Voice Weekly
နေပြည်တော်က ဇမ္ဗူသီရိနဲ့ ပုဗ္ဗာသီရိ မြို့နယ်တွေအတွက် ဆိပ်နမ်ဒုန်းကျေးရွာမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ NLD ပါတီ ရုံးခန်းရှေ့ မြေစိုက်ဆိုင်းဘုတ်ကို အမည်မသိသူတွေက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ အာရုံတက်အချိန်မှာ လာရောက် ဖျက်ဆီးသွားကြောင်း သိရပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ အခုလို NLD ဆိုင်းဘုတ် အဖျက်ဆီးခံရတာဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖြစ်တယ်လို့ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ကနေ NLD ပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
NLD ဆိုင်းဘုတ် ဖျက်ဆီးသူတွေ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် လောလောဆယ် ပုဗ္ဗ္ဗာသီရိ ရဲစခန်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဆင့်ဆင့်ကို တိုင်ကြားထားကြောင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ကနေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါတယ်။
Source :RFA Read More
"လူသုံးမျိုး" - ရေးသူ-လူထုစိန်ဝင်း
"မြန်မာလူမျိုးက နှစ်ယောက်ရှိရင် နှစ်ဂိုဏ်းကွဲတယ်။ သုံးယောက်ရှိရင် သုံးဂိုဏ်းကွဲတယ်။ ဘယ်တော့မှ မညီညွတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မတိုးတက်တာ " နိုင်ငံရေး အလုပ်ကိုမနှစ်မြို့တဲ့လူစားများရဲ့ ပါးစပ်ကအမြဲတမ်းကြားရလေ့ရှိတဲ့ စကားဖြစ်တယ်။
သူတို့စကား ခိုင်မာစေဖို့အတွက် ကွန်မြူနစ်တွေလည်း ကွဲတယ်။ ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေလည်း ကွဲတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်လည်း ကွဲတယ်။ ဖဆပလလည်းကွဲတယ်။ ပထစလည်း ကွဲတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်က ဂျီစီဘီအေလည်းကွဲ၊ သခင်တွေလည်းကွဲ၊ မကွဲဘူးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှကို မြန်မာပြည်မှာ မရှိဘူးလို့ ဆက်ပြောချင်ပြောပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဘယ်သူတွေက အဲဒီလိုပြောကြတာလဲလို့ ကြည့်လိုက်ရင်၊ အများစုဟာ ဘယ်ခေတ်၊ ဘယ်အခါမှာမှ အများအရေးကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်လေ့မရှိဘဲ၊ ကိုယ့်အရေး၊ ကိုယ့်မိသားစုအရေး တစ်ခုတည်းကိုသာ အလေးထားလုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ဒီလူတွေဟာ အများအကျိုး၊ ရပ်ကျိုးရွာကျိုး သူတို့မလုပ်တာကို ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် သက်သက်မဲ့ရမယ်ရှာပြီး ပြောကြတာဖြစ်တယ်။ လူ့လောကမှာ ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင် တူတယ်ဆိုတာသာရှိပြီး စိတ်သဘောထားချင်း တစ်ထပ်တည်း တစ်သားတည်းကျအောင် တူတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ဒါသဘာဝတရား ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ချင်းတူတဲ့ အ မြွှာချင်းတောင်မှ စိတ်ချင်းအတော်တူပေမယ့် အားလုံးတစ်သားတည်းကျအောင် တူတာတော့မဟုတ်ဘူး။ မတူတဲ့နေရာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ မိဘနဲ့သားသမီးလည်း အလားတူပဲ။ စရိုက်မတူတာတွေရှိသလို အကြိုက်မတူတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါဟာ လူ့လောကရဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သဘာဝပဲ။ အဆန်းမဟုတ်ဘူး။ အပြစ်ပြောစရာလည်းမဟုတ်ဘူး။
ကွဲကြ၊ ပြဲကြတယ်ဆိုတာက အယူအဆချင်း၊ ယုံကြည်ချက်ချင်း၊ မတူလို့မဟုတ်ဘူး။ ဦးနှောက်လူလား မမြောက်သေးလို့နဲ့ နိုင်ငံရေးမရင့်ကျက်သေးလို့ဖြစ်တာ။ လူလားမြောက်ရင့်ကျက်ပြီဆိုရင် အမြင်အယူအဆ မတူတာဟာ လူ့သဘာဝပဲလို့ နားလည်ပြီး သည်းခံနိုင်တယ်။ အတူတွဲပြီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တယ်။ လူ့ဘုံလူ့လောကဆိုတာ မတူတဲ့လူတွေအတူတွဲပြီး မတူတဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို တစ်ဦးချင်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လုပ်ကြကိုင်ကြရင်းက ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။
လူ့လောကဆိုတာလည်း အတူတူပဲ။ အသွေးအရောင်၊ အမျိုးအနွယ်မတူ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူအများအပြားဟာ တူညီတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့အတွက် ဘုံအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ ကြိုးနဲ့စုစည်းပြီး ခရီးသွားနေတာဖြစ်တယ်။ တူညီတဲ့ ပန်းတိုင်ဆိုတာကတော့ အေးချမ်းသာယာပြီး လူတိုင်းလူတိုင်း မတောင့်မတ မကြောင့်မကြ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်နိုင်တဲ့ သာယာရွှေပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သာယာရွှေပြည်ကိုရောက်ရင် လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ အသားရောင်မရွေး၊ လူသားအားလုံး ခံစားရမှာဆိုတော့ ကိုယ်လည်းခံစားရမယ်။ သူလည်းခံစား ရမယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ခံစားချင်စိတ်က ဘုံအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက ညီညွတ်ရေးဆိုတာ တူညီတဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွားတစ်ခုအတွက် ပူးတွဲနေထိုင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဘုံအကျိုးစီးပွားချင်း တူရင်တွဲလုပ်တယ်။ မတူရင်တွဲမလုပ်ဘူး။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကိုယ့်ဖာသာလုပ်တယ်။ ဒါသဘာဝပဲ။ ဘာမှမထူးဆန်းဘူး။ အပြစ်ပြောစရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ လမ်းကသွားသလို၊ သူလည်းသူကြိုက်တဲ့ လမ်းကသွားပါစေ။ ဒါလူတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးပဲ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ့်မြတ်နိုးသလို သူလည်းသူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားမှာပဲ။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး သူ့အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထားလေးစားတာ၊ သူ့အခွင့်အရေး သူ့စိတ်ကြိုက် အသုံးချတာကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ လက်ခံပေးတာဟာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်။
တချို့ဆင်းရဲလွန်းလို့ ကြံမိကြံရာကြံရင်းနဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ဖြစ်၊ သူခိုးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်။ သူတို့ဟာ လူဆိုးတော့လူဆိုးပဲ၊ ဒါပေမဲ့ မတရားနိုင်ထက်စီးနင်းနဲ့ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမလုပ်ဘူး။ သူတစ်ပါးသားပျို၊ သမီးပျိုကို ထိပါးစော်ကားမပြုဘူးဆိုရင်တော့ လူယုတ်မာလို့ခေါ်တဲ့အဆင့် မရောက်သေးဘူးလို့ ဆိုချင်တယ်။ သူတို့အမှားကိုသိလို့ နောင်တတရားရ ပြုပြင်တယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်သင့်သူကို ခွင့်လွှတ်ရမယ်။ ပြုပြင်ပေါင်းသင်းသင့်သူကို ပေါင်းသင်းနိုင်တယ်။ ရှေးခေတ်၊ ရှေးအခါ နာမည်ကြီးတဲ့ ရှင်မတောင် ဓားပြဂိုဏ်းကြီးတောင် နောက်ဆုံးကျတော့ ဖက်ဆက်တော်လှန်ရေးကြီးထဲ ပါဝင်လာပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ အဖိုးတန်သားကောင်း၊ သမီးကောင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့ သာဓကရှိပါတယ်။
တချို့ကျတော့ သောက်စားမူးယစ်မှုမရှိဘူး၊ လောင်းကစားမလုပ်ဘူး၊ ဓားပြလည်းမတိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူသေသေငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ရွာလုံးငတ်ပြီး သေချင်သေ ငါ့စပါးကျီထဲက စပါးတွေတော့ထုတ်ရောင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး လူတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သေသွားတာကို ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေနိုင်တယ်။ တချို့က နိုင်တုန်းဖိထောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားနည်းသူတွေကို နိုင့်ထက်စီးနင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တယ်။ တချို့ကျတော့ မသိနားမလည်သူတွေကို လိမ်ညာလှည့်စားပြီး ကိုယ်ကောင်းစားဖို့ ဂုတ်သွေးစုပ်တတ်တယ်။ တချို့က သူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ပြီး လူမသိအောင် မတော်မတရား အလုပ်တွေလုပ်တတ်တယ်။
လူသုံးမျိုး" ဆောင်းပါးက ၂၁.၀၂.၂၀၁၂ ထုတ် News Watch Journal မှာ ပါတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်